Maalinta ku bilaw insha allaah, Kaniisada aduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxaan si adag u aaminsanahay inay fiicantahay in maalinta Ilaah la bilaabo. Maalmaha qaar waxaan ku bilaabayaa "Subax wanaagsan oo Ilaah!" in la dhaho. Kuwa kale waxaan dhahaa "Ilaah wanaagsan waa berrito!" Haa, waan ogahay, taasi waa wax yar oo duug ah, laakiin waxaan si daacadnimo ah u dhihi karaa inaan sidaas dareemayo markasta iyo ka dib.
Sanad ka hor, naagtii aan qolka kula wadaagayay shir loogu tala galay qorayaasha ayaa ahayd mid cajiib ah. Waqti kasta oo aan seexanno, waxay ugu yaraan saacad ku qaadatay tukashada ama barashada Kitaabka Quduuska ah ka hor inta aysan bilaabin maalinteeda. Afar, shan ama lix saac - ma danayn! Waxaan u bartay haweeneydan sifiican taasina waa wali howlaheedii caadiga ahaa ee maalinlaha ahaa. Iyadu aad bay iskaga dhegan tahay - meel kastoo ay dunida ka joogto, dhibkasta oo ay ku mashquulsan tahay xusuus qorkeeda maalintaas. Runtii waa shaqsi gaar ah oo aan aad u jeclahay. Waxaan ku dhawayd inaan dareemay dambiile markaan u sheegay inaanay ka walwalayn laambada aqriska markay kacday maxaa yeelay waan ku seexan karaa iftiinka.
Fadlan ha ii qaldamin! Waxaan si adag u aaminsanahay inay fiican tahay inaad maalintaada bilowdo Ilaah. Waqti lala galo aroortii Ilaah wuxuu ina siinayaa awood aan ku maareyno howlaha maalinta, wuxuu naga caawiyaa sidii aan nabad ugu heli laheyn walwalka. Waxay noo ogolaaneysaa inaan diirada saarno Ilaah oo aan diirada saarin waxyaabahayaga yar ee xanaaqsan ee naga dhigaya inaan ka weynaanno sida ay dhab ahaan yihiin. Waxay naga caawinaysaa inaan maskaxdayada ku hayno tunka iyo inaan ulahadalno kuwa kale ereyo wanaagsan. Taasi waa sababta aan ugu dadaalto waqti dheer oo salaadda iyo akhriska subixa aroorta. Waan ku dadaalaa, laakiin markasta ma guuleysto. Mararka qaar maskaxdayda ayaa diyaar ah, laakiin jiidhkaygu waa daciif yahay. Ugu yaraan taasi waa cudurdaarkeyga Baybalka (Matayos 26,41). Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale garan karto iyada.
Si kastaba ha noqotee, waxkastoo lumin maayaan. Ma jirto sabab loo maleyn karo in maalkeenna lagu halaagsamey taas darteed. Waxaan weli ku adkaysan karnaa oo aan qiraynaa Ilaah ugu yaraan subax kasta marka aan toosno - xitaa marka aan weli sariirta kuheleyno. Waa wax soo jiidasho leh waxa "gaaban mahadsanid mudane hurdo wanaagsan!" nala sameyn karaa haddii aan ka warhayno jiritaanka Ilaah. Hadaanan si fiican u seexan, waxaan dhihi karnaa wax lamid ah, "Habeenkii si fiican uma seexan, mudane, sidaa darteed waxaan u baahanahay caawintaada si aan maalinta uga dhigo bilow wanaagsan." Waan ogahay inaad abuuray maanta. Iga caawi inaan ku raaxeysto. » Haddii aan ka gudubno, waxaan dhihi karnaa wax sida "Oh. Waa soo daahay. Mahadsanid mudane, hurdada dheeriga ah. Haddaba fadlan iga caawi sidii aan ku bilaabi lahaa oo aan diiradda kuu saari lahaa! » Waxaan ku casuumi karnaa Ilaah inuu koob shaah ah nala qaato. Waan la hadli karnaa markii aan gaadhiga uwada shaqeyno. Waxaan u sheegi karnaa inaan jecel nahay oo aan uga mahad celin karno jacaylkiisa shuruud la’aanta ah ee uu noo qabo. Ka fikir ... Maalinta kuma bilaabi Ilaah maxaa yeelay isagu wuu rajaynayaa ama maxaa yeelay isagu kuma faraxsani annaga haddii aanan samayn. Waxaan ku bilaabeynaa maalinta Ilaah hadiyad yar oo nafsadeena u leh Tani waxay go'aamineysaa aragtida gudaha ee maalinta waxayna naga caawineysaa inaan diirada saarno ruuxiga oo aan aheyn kaliya jirka. Waxay noqon kartaa danteena inaan u noolaano Ilaah maalin kasta. Sidee ayaynu taas u sameyn karnaa haddii aanaan ku bilaabin maalinta isaga waa su'aal.